Best Water Parks Na Europe N'ihi A Ezumike | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Water Parks Na Europe N'ihi A Ezumike
Best Water Parks Na Europe N'ihi A Ezumike
Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 01/01/2021)
Ọ dịghị ihe na-ekwu, sị ezumike ma ọ bụ ezumike, ezi dị ka a mmiri park, adịghị ị na-eche? Sunshine, ihe nracha, na eji ala ụfọdụ oke mmiri slide bụ kacha Ntụziaka maka fun n'oge Summer Ememe! Anyị mere siri ike ọrụ nke enyocha ndị Best Water Parks na Europe anyị onwe anyị na-enye gị ihe kasị ezi akuko na ha na anyị nwere ike! Ebe a na- kacha mma mmiri ogige ntụrụndụ na Europe maka gị na ezinụlọ gị na-enwe.
Lalandia - Billund, Denmark
Na na na na naa n'ihi na ụfọdụ Nordic njem? Lelee Lalandia, nnukwu mmiri park na Scandinavia, na otu onye nke Best Water Parks na Europe. Featuring a nhọrọ nke ezinụlọ-enyi na enyi nkiri slide, anyị karịsịa ịhụnanya na octopus ride! Afọ ole anyị ka show ezie mgbe ọzọ mata na anyị ndepụta banyere nke a park bụ kpụ ọkụ n'ọnụ ọdọ mmiri na egwu umengwụ stream!
Tụgharịa a njem n'ime agụmakwụkwọ otu oke. Kids ga-akpọ isiala nye ihe Cave Pool, ebe ha nwere ike na-edebe coral kpụkọtara ọnụ na osisi na azu. Ọ bụghị nkọ na oktopus? Mgbe ahụ, a ga-otighiti gị fancy; Ndị nne na nna agụụ na-agụ ntụrụndụ nwere ike iku ume mfe na aromatherapy saunas! Akara! Ka ụmụaka na-enwe na aqua ikwommiri mmiri ama egwuregwu, na Monky Tonky ime ụlọ egwuregwu, ma ọ bụ gaa bowling mgbe ị na-ajụ oyi.
E nwekwara ise nta mmiri na-asọ asọ ka obere mmiri na ndị hụrụ. ego: Lalandia emi odude ke Billund, ebe LEGOLAND bụ ihe ọzọ na nnukwu ezinụlọ Olee!
Tropical Island AMAZONIA - Brandenburg, Germany
Anyị na-dị ka anya dị ka ị na anyị hụrụ ụfọdụ nke Best Water Parks na Europe ná mba na-adịkarị ejedebe ke coldest na nke kacha mma nke Winter ọnwa. Tropical Island AMAZONIA na Brandenburg, Germany sokwa.
Nke dị ihe dị ka otu awa nke mbanye si Central ojii na Berlin, Tropical Island AMAZONIA bụ a oke 35,000-square mita mmiri-fun-paradise. Best of niile? Ọ na-emeghe nile n'afọ! yep, ọ bụ a anọ na-oge ime ụlọ-n'èzí South Pacific-themed mma! Ọ na atụmatụ a 27 mita-akwa mmiri-slide elu, ihe ime ụlọ osimiri, a kpụ ọkụ n'ọnụ laguunu, na a kiddie ọdọ mmiri na a mmiri play table.
Ike Gwụrụ nke ịbụ mmiri ma ka chọrọ nwere fun? Ghara iche, banye maka a gburugburu nke Obere-golf ma ọ bụ na-ikuku balloon ride. Nature-n'anya ezinụlọ ga-enwe ogige si ime ụlọ mmiri ozuzo-ọhịa, nke atụmatụ 50,000 osisi sitere gburugburu ụwa. Dị ka ọtụtụ nke mmiri ogige ntụrụndụ anyị họọrọ, e nwere ihe ndị mụrụ ya, oke! Ndi onye na-ekwu afụ loungers na ịhịa aka n'ahụ ọdọ mmiri? Gụọ anyị na!
Berlin na Potsdam Ụgbọ oloko
Berlin na Hamburg Ụgbọ oloko
Frankfurt na Berlin Ụgbọ oloko
Berlin na Munich Ụgbọ oloko
Mmiri Park Splashworld – Avignon France
Ọ mbụ na kasị mmiri-themed park na France, nsogbu na Provence region, nso Avignon, ya nwere ike inye gị na ezinụlọ agafe, ebe maka ụmụaka, dị iche iche mmiri na-asọ asọ, osimiri kasị umengwụ Europe, na nnukwu surf simulator na ụwa. Nke a mmiri ogige bụ emeghe n'oge okpomọkụ oge (site na June September) na ọ bụ na-adabara ndị mmadụ na nkwarụ.
How to reach Ikwommiri World WAtea Park?
Splashworld na nsogbu 17 km si Avignon, nke na-eme ya mfe inweta! Ọzọkwa, nso nke na ọdụ ụgbọ ala na-ejikọ ndị mmiri park na ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke Avignon, eme ka o kwe ndị ejegharị ejegharị bọs ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè site na ndị ọzọ ebe ke France iru Splashworld ngwa ngwa!
15 nke 17 ọdọ mmiri na-emeghe nile n'afọ na otu onye nke nnukwu ime ụlọ ọdọ mmiri na jikọọ na a kpụ ọkụ n'ọnụ n'èzí ọdọ mmiri nwekwara oghe ofụri isua. The-efegharị efegharị ọdọ mmiri na surf ọdọ mmiri ịkpasu ikuku nke seaside ememe. The surf ọdọ mmiri bụ oke! Ọ ga-eji pụrụ iche mbadamba mepụtara maka ime ụlọ were nakwa na gị onwe gị board.
Ọ bụrụ na ị na-achọ imega e a 25 m (82 ft) egwu mmiri na a 3 m (10 ft) mmiri elu. The ime ụlọ njem ọdọ mmiri ahụ na-enye 11 slides na a ngụkọta ogologo nke fọrọ nke nta 1 km (0,6 mile). The kasị elu slide na-ewe gị ala na a na-akpali akpali na-agba ịnyịnya si 17 m (55 ft). Ọzọkwa, e nwere a dum slide maka elu atọ ndị mmadụ nade nakwa dị ka ihe yabasị slide na a 180 m (590 ft) ogologo ugwu osimiri, nwegasịrị na nkpoda nkume, ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta adventurous.
Lyon ka Avignon site na Ọzụzụ
Paris na Avignon Ụgbọ oloko
Nice na Avignon Ụgbọ oloko
Marseilles ka Avignon Ụgbọ oloko
Anyị Favorite ghota maka Best Water Parks na Europe bụ: Mmiri Park Caneva World, Italy
Lake Garda nwere ike ama n'ihi na ya na udo na obi iru ala, ma Caneva World n'ezie emee ka anya doo ihe elu. This double whammy of a ogige ntụrụndụ kewara n’etiti Movieland na Acquapark.
Nweta nso Action nkiri on Overdrive Live Set, kpọgidere jidesie gị oche na John Rambo stunt Gosi, mgbe kwụsịtụ niile jụ ikwere na Illusionist show. E nwere agafe maka ezinụlọ ya dum, si ọduọ mmiri na Kitt Super Jet, na heady elu nke Hollywood Action Tower na-emenye ụjọ Diabolik Invertigo igwe na-agba okirikiri.
Ọ bụrụ na ihe niile na-eme na-akawanye a bit oke ọkụ, amaba n'ime Caneva Aquapark setipu n'okpuru nkwụ, na ndò nke oke ugwu ugwu! Ma na a nnukwu-efegharị efegharị ọdọ mmiri na-eju mmiri na-asọ asọ ka Ejima ọnụ ọnụ, Anaconda na Sherry e nwere ọtụtụ anwa unu osimiri.
The ntụrụndụ na-aga n'ihu na Medieval Times Restaurant & Gosi – ịba onwe gị ala a ochie nnukwu ụlọ na inwe njikere maka knights, inyinya, na a oké jousting ndorondoro!
Trento ka Lake Garda Peschiera Ụgbọ oloko
Bolzano Bozen ka Lake Garda Peschiera Ụgbọ oloko
Bologna ka Lake Garda Peschiera Ụgbọ oloko
Venice na Lake Garda Peschiera Ụgbọ oloko
Njikere abịa gị uwe eji egwu mmiri na-aga na a na-eme njem chọta The Best Water Parks na Europe? Heck ee! Best ozi ọma ma, ị nwere ike nweta ihe a nile ebe mfe na enyemaka nke SaveATrain ! Na-enweghị zoro ezo mmezi ụgwọ, ị ga-enwe ihe na-emefu na egwu agafe na ezi ugboro! AKWỤKWỌ na Summer ezumike, ugbu a!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / es ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel familytrip summerholidays
M na-agbalị ịnọ n'ihu nke usoro, M ịzụlite gbara ọkpụrụkpụ echiche na akụkọ na captivate kiriri na ụgbọala njikọ aka. Na-amasị m na-eteta kwa ụtụtụ na kwurịta na ihe m ga-ede taa. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Olee otú Iji Nọrọ Nchekwa mgbe ụgbọala N'oge Winter
Ndụmọdụ Cargbọala, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
The Best Ski Resorts Iji Gaa Site Train
Train Travel Austria, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe
5 Best Day Njem Site Vienna Iji Chọpụta Austria
Train Travel Austria, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
7 Best flea Markets Na Europe